Ebe iri nri na Lisbon | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Gastronomy, Lisboa, Oge ntụrụndụ
La Isi obodo Portugal bụ ebe a na-agakarị maka nnukwu amara ya, maka ịhụ okporo ámá ya kamakwa maka gastronomy ya na-atọ ụtọ. Nke a bụ obodo ọ bụghị naanị na a ga-ahụ ụkwụ, kama ọ na-akpọkwa anyị ka anyị kwụsị n'ọtụtụ ụlọ nri ọ nwere. Na mgbakwunye, ịkwesighi imefu ego buru ibu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iri nke ọma na Lisbon.
Ka anyị lee ihe bụ efere nke Gọọmentị Portuguese nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ n'ụlọ nri. Also ga-ahụkwa ụfọdụ n'ime ebe ndị a nwere ike ịrụ ụka agaghị abụ ebe ị ga-eleta. N'ihi na anyị ekwesịghị ichefu na gastronomy bụ akụkụ dị mkpa nke njem.
1 Ihe iri na Lisbon
2 Ebe iri nri na Lisbon
2.1 Cikpụrụ do Calhariz
2.4 Bica eme Sapato
2.5 Ogwe mmanya mmanya Nectar
Ihe iri na Lisbon
Mara ebe anyị ga-aga ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iri ezigbo nri dịkwa mkpa dịkwa ka ịmara ihe anyị ga-eri. Gastroronomy Portuguese jupụtara na nri dị ụtọ na desserts a ma ama, ya mere, ọ bara uru ịkọwa ihe anyị chọrọ ịnwale mgbe anyị na-aga ụlọ nri. Nri e ji koodu kọọpị mee dị ọtụtụ, ebe ọ bụ otu n’ime ihe ndị o ji kpakpando mee, ya na azụ̀ ndị ọzọ. Echefula kilomita nke ụsọ oké osimiri na Portugal. A na-eji bacalhau á bras shredded cod, a na-eme bacalhau á lagareiro na bacalhau com natas ji ude. Ma na azu ndi nwere sardine, salmon ma obu tuna bu ndi ozo.
N’agbanyeghi na nri azu bu ndi a ma ama ma dikwa mkpa, odi ndi ozo eji anu eme. Otu n’ime nri ha kpakpando bu alentejana ezi. A na-eji klam na poteto eme anụ a, yana ngwakọta nke mbụ. Ihe ndi ozo anyi nwere ike gbalita na Lisbon bu nke a roara n’ọkụ, nke bu anu ehi, ma obu nke a fraara n’ọkụ, nke bu okuko e ghere eghe, kpochapụwo nke na adighi ada ada.
E nwere nri ndị ọzọ na-ewu ewu dịka caldo verde, nke bụ ofe kabeeji. N'etiti ha desserts anyị enweghị ike ichefu pasteis de Belem, nke bụ achicha achicha na icing sugar na pawuda ntụ ntụ. A ghaghị ịnwale nri ndị a dị ụtọ ọhụrụ. Ihe ndi ozo ndi ozo bu Alentejo achicha akwa, osikapa di nma ma obu bolo de bolachas, achicha bisiki oyi.
Ebe iri nri na Lisbon
Na Lisbon anyị nwere ike ịchọta ụlọ nri na-ekewaghị ekewa kamakwa ọtụtụ ebe iri nri nke ọma na euro iri abụọ ma ọ bụ obere. Ọzọkwa, echefula banyere ndị ahụ ụlọ oriri na ọ classicụ classicụ mara mma ebe ị nwekwara ike ịnụ ụtọ fado, egwu ya kachasị ewu ewu. Ya mere, ka anyị lee ụfọdụ n'ime ihe ndị nwere ike ịmasị.
Cikpụrụ do Calhariz
Nke a bụ ụlọ oriri na ọ ofụ ofụ nke ezumike ma mara nke ọma nke na-eri nri Portuguese nri. Ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke dị nso na agbata obi Chiado ma nwekwaa ọpụrụiche pụrụ iche ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị anụ ma ọ bụ azụ. Na mgbakwunye, ọ nwere nchịkọta nhọrọ buru ibu ma ọ bụrụ na anyị ejighị n'aka na ihe anyị chọrọ.
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ a dị n'ime Casa de Linhares na aha ya pụtara cod na ihendoriDika efere nri Portuguese nke kacha dị, ọ na-enye anyị echiche banyere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Anyị na-eche ihu ebe mara mma iji nwaa efere Portuguese kacha mma. Mana ebe a nwere ihe dị iche na n'ime ya anyị nwekwara ike ige otu n'ime nnukwu Portuguese fados mgbe anyị na-atọ ụtọ nri Portuguese.
Ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ a ụlọ oriri na ọ modernụ modernụ nke oge a na ikuku ọkaibeMgbe ahụ anyị nwere ike ịga Parque Eduardo VII ka anyị rie nri abalị na iri na otu. Emepere ya na 2004 ma taa, ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ thatụ nke bụ otu n'ime ihe ọgbara ọhụrụ iji nwaa nri Portuguese nke na-eri naanị nri oge a na-eji nri dị ụtọ na nke ọhụrụ. N'ime ụlọ oriri na ọ thisụ thisụ a ọ ka mma ịdebe akwụkwọ tupu oge eruo.
Bica eme Sapato
Este ụlọ oriri na ọcụ peụ peculiar dị na ụlọ nkwakọba ihe a rụzigharịrị nke ha abughi nani ha tinye mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ aụ, kamakwa mpaghara sushi na oghere maka ihe omume, yana ụlọ ngosi ngosi. Ebe nke oge a nwere oke echiche n’elu osimiri.
Ogwe mmanya mmanya Nectar
Oghere a bụ ụlọ nkwakọba ihe ochie nke emezigharịrị iji nye ohere nke oge a. Na ebe a ị nwere ike ịnụ ụtọ ya nhọrọ kacha mma nke mmanya ndị Portugese na kwa ụwa mmanya. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ebe kachasị mma maka ndị hụrụ mmanya a n'anya nke na-enweta nnukwu mkpa na ala ndị Portuguese. A na-ahazi usoro ịnụ ụtọ mmanya a ma ọ bụrụ na anyị nwere mmasị n'okwu a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị esoro onye na-adịghị a wineụ mmanya, enwere mmanya ndị ọzọ dị ka tii ma ha na-enyekwa tosta na nkọwa ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Na-eri nri na Lisbon